Madaxwaynaha Turkiga oo sheegay in Wadankiisu uusan u baahnayn ku biiridda M Yurub | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Madaxwaynaha Turkiga oo sheegay in Wadankiisu uusan u baahnayn ku biiridda M...
Madaxwaynaha Turkiga oo sheegay in Wadankiisu uusan u baahnayn ku biiridda M Yurub
Madaxweynaha Dalka Turkiga Rajeb Dayib Erdogan ayaa maanta oo Axad ah sheegay in Dalkiisa uusan baahi u qabin ku biiridda Midowga Yurub kadib 11 Sano oo uu Turkiga quuddarreynayay ku biirista Midowga Yurub.
Erdogan oo ka soo laabtay booqasho uu ku tagay Dalalka Pakistaan iyo Uzbekistan,ayuu sheegay in Dalkiisa uu ku biiri karo Waddamada Ruushka,Shiinaha iyo Waddamada dhaca Bartamaha Aasiya eel eh isbaheysiga Amniga ee SCO.
Turkiga waxaa uu ka mid yahay Waddamada ugu tunka weyn NATO,haddii uu ku biiro Isbaheysiga SCO ee u qaabeysan ka digtoonaashaha reer Galbeedka,waxaa ay taasi dhabar jab diblomaasiyadeed ku tahay Waddamada Reer Galbeedka iyo kuwa xubnaha ka ah NATO.
“Dadka Turkiga waa in ay dareemaan xasilooni,wax aysan u dhibin Yurub nooma dhibi doonto,waxaana dooneynaa in aay shacabkeenna afti ka qaadno 2017ka billowgeeda,taas oo aan kaga fiirsaneyno sii wadidda la xaajoodka Yurub ama iska dhaafideeda,waxaana ay noqoneysaa halka ay u bataan”,ayuu yiri Erdogan oo Diyaaradda dusheeda kula hadlayay Warbaahinta.
“Maxaa diidaya in Turkiga ku biiro Shangahai 5?,waxaan weydiiyay Putin,waxaan weydiiyay Madaxeeynaha Kazakhstan Kazakhstan”,ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Urur Goboleedyka Shangahai shan ee Ruushka,Shiinaha iyo 4 Waddan oo dhaca bartamaha Aasiya oo kala ah Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan iyo Uzbekistan,ayaa la qaabeeyay 2001dii kadib weerarkii mareykanka ee Afghahistaan,waxaana ay ku heshiiyeen in ay ka mideysnaadaan aragtida amniga ee Waddamadooda.
Kazakhstan, Kyrgyzstan iyo Uzbekistan Dadkooda waxaa ay ku hadlaan Afka Turkiga,waxaana ay 2013kii Ankara iyo Waddamadaas saxiixdeen heshiis iskaashiga afka ah.
Waddamada Mongolia, India, Iran, Pakistan iyo Afghanistan waxaa ay Urur Goboleedkaasi ka yihiin kor joogto,sidoo kale sida Turkeyga waxaa af wadaan la ah dalka Belarus lana filayo in mustaqbalka uu rasmi ugu biiro.
Waddamada Urur Goboleedka Af wadaagga la ah waxaa ay xaq u leeyihiin in ay ka qeyb galaan kulamada heerka Wasiir ama kuwo gaar ah laakiin xaq iyo awood umalaha in ay codeeyaan.
Turkiga iyo Midowga Yurub ka sokoow ka mid ahaanshiyaha NATO,waxaa xusid mudan in labada dhinac uu dhexyaal heshiis dhanka soo galootiga ah oo uu Turkiga ku qaabilayo Qaxootiga ka cararaya colaadda Bariga dhexe,mIdowga Yurubna ay ku bixinayaan dhaqaalaha lagu heynayo.
Laakiin xiriirka Erdogan iyo Midowga Yurub ayaa hoos u dhacay kadib markii uu dhacay afgamigii fashilmay ee Turkiga Bishii July,taas oo uu Erdogan ku eedeeyay reer Galbeedka in ay fara gelin ku hayaan dowladda Turkiga.
Afgambigaas kadib Dowladda Turkiga waxaa ay shaqada ka joojisay 110,000 oo Qof,waxaa kale oo xabsiga la dhigay 36,000 oo qof,hay’adao warbaahineed ayaa sidoo kale hawada laga saaray.
Afgambigii fashilay ee dhacay july 15kiidii Sanadkan waxaa ku dhintay 240 Qof ,waxaana ku dhaawacmay kumanaan kale,iyada oo Dowladda Turkiga ay Afgambigaas ku eedeeysay in uu ka dambeeyay Wadaadka fadhigiisu yahay mareykanka ee Fatxullahi Gulaam.
W/Q:Adam Ibrahim Farah (Showqi)
Previous articleWafdi ka socda QM iyo Dowladda Soomaaliya oo gaaray Jowhar
Next articleMaxkamad ku taala Puntland oo xabsi daa’in ku xukuntay dad loo haysto Daacish-nimo